Uyisebenzisa Kanjani Imikhankaso Ye-imeyili nge-Gmail | Martech Zone
Uyisebenzisa Kanjani Imikhankaso Ye-imeyili nge-Gmail
NgoMsombuluko, Ephreli 20, 2020 NgoMsombuluko, Ephreli 20, 2020 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi awudingi umhlinzeki wesevisi we-imeyili ogcwele (i-ESP) nazo zonke izinsimbi nezimpempe zokuphathwa kohlu, abakhi be-imeyili, ukulethwa namanye amathuluzi ayinkimbinkimbi. Ufuna nje ukuthatha uhlu bese uluthumela kulo. Futhi-ke, uma kuwumyalezo wokumaketha - nikeza abantu ikhono lokuphuma kwimilayezo yesikhathi esizayo. Yilapho i-YAMM ingaba yisixazululo esifanelekile.
I-Yet Another Mail Merge (YAMM)
I-YAMM wuhlelo lokuhlanganisa i-imeyili olunikwe amandla i-Chrome olwenza abasebenzisi bakwazi ukwakha uhlu (nge-import noma i-Google Form), baklame i-imeyili ngokwenza ngezifiso, bayithumele kuhlu, balinganise impendulo, futhi baphathe ukungazikhiphi ohlwini konke kusixazululo esilula.
I-YAMM: Ukuhlanganisa okulula kwe-imeyili nge-Google Mail namaSpredishithi
Faka oxhumana nabo ku-Google Sheet - Beka amakheli e-imeyili wabantu ofuna ukubathumela i-imeyili ku-Google Sheet. Ungabathatha koxhumana nabo be-Google noma ubangenise kusuka kuma-CRM afana ne-Salesforce, HubSpot, ne-Copper.
Dala umlayezo wakho ku-Gmail - Khetha isifanekiso esivela kugalari yethu yezifanekiso, bhala okuqukethwe kwakho kwe-imeyili ku-Gmail, engeza okuthile okwenziwe ngezifiso, bese ukugcine njengohlaka.
Thumela umkhankaso wakho nge-YAMM - Buyela emuva ku-Google AmaSpredishithi ukuze uthumele futhi ulandelele umkhankaso wakho we-imeyili nge-Another Another Merge Mail. Uzokwazi ukubona ukuthi ngubani ohlulekile, ongabhalisile, ovule, ochofoze futhi ophendula imilayezo yakho ukuze wazi ukuthi uzobathumela ini ngokulandelayo.
Ukuze uqalise, vele ufake i-YAMM ku-Google Chrome. I-YAMM inhle imibhalo kanjalo.
Faka i-YAMM ku-Chrome
Tags: ukuchofozaimikhankaso imeyiliGmailukulandelela i-gmailamafomu e-googlei-google g suiteindlelai-yamm
I-Outplay: Ipulatifomu yokunika amandla yokuthengisa ephumayo ye-Omni-Channel